तीन बर्षिया नाबालिका बाबुद्वारा बलात्कृत::जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
तीन बर्षिया नाबालिका बाबुद्वारा बलात्कृत
आफ्नै छोरी बलत्कारका घटना नयाँ रहेनन् । तर बर्दियामा तीन बर्षिया बालिका आफ्नै बाबुबाट बलात्कृत भएको समाचारले सबैतिर हलचल ल्याईदिएको छ । बलात्कृत तीन वर्षिया नाबालिकाको भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगन्जमा उपचार भईरहेको छ । भाद्र ९ गते राती नाबालिका बलात्कृत भएपछि बालिकालाई भोलिपल्ट बिहान मात्रै उपचारका लागि अस्पताल पु¥याइएको हो ।
भेरी अञ्चल अस्पतालका प्रसुती रोग विशेषज्ञ डा. उषा थापाले शल्यक्रिया गरेपछि बालिकाको रक्तास्राव रोकिएको थियो । भेरी अञ्चल अस्पतालका प्रमुख डा. पिताम्बर सुवेदीले बालिकाको उपचारका सम्पूर्ण सहयोग गर्ने बताएका हुन् ।
बालिकाको साथमा १३ बर्षिया दिदी छन् । नाबालिका छोरीलाई बलात्कार गर्नेबाबु भने फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेकाप्रमुख एसपी शेखर कोइरालाले घटनापछि उपचारका लागि भन्दै बाबु, उनका भाई भानुभक्त, १३ बर्षिया छोरीसहित नेपालगन्ज आएको देखिएको बताए । भाईलाई भने प्रहरीले रुपैडियाबाट फर्काउन सफल भएको जनाएको छ । माइती नेपाल नेपालगन्जका कार्यक्रम संयोजक केशव कोइरालाले घटना अमानवियभएको बताएका छन् ।